Football Khabar » रोनाल्डोको त्यो ‘हेडिङ गोल’ : बन्यो दुनियाँलाई चकित पार्ने रेकर्ड !
रोनाल्डोको त्यो ‘हेडिङ गोल’ : बन्यो दुनियाँलाई चकित पार्ने रेकर्ड !
अहिले फुटबलको जगत्मा यदि कुनै कुरा ‘हट केक’का रूपमा चर्चामा छ भने, त्यो इटालियन युभेन्टसका क्रिस्टियानो रोनाल्डो र उनको हेडिङ गोल नै हो । गत राति इटालियन सिरी ए फुटबलमा रोनाल्डोले गरेको गोल हेडिङ गोलको चर्चा अहिले चुलीमा छ ।
अवे मैदानमा भएको खेलमा युभेन्टसले साम्पडोरियलाई १–२ ले हराउँदा रोनाल्डोले खेलको ४५औं मिनेटमा अपत्यारिलो हेडिङ गोल गरेका थिए । जो कोही उनको त्यो जादुयी गोलबाट नतमस्तक बन्न सक्छ ।
अहिले विश्वभरका खेल मिडियाले रोनाल्डोको सो गोलको प्रशंसा गर्दै व्यापक स्थान दिइरहेका छन् । अन्य फुटबलर तथा खेलकुदकर्मीले पनि रोनाल्डोको सो चमत्कारिक गोलको खुलेरै तारिफ गरिरहेका छन् ।
युभेन्टस १–१ को अवस्थामा रहेका बेला रोनाल्डोले गरेको सो गोल नै जितका लागि पर्याप्त बन्यो । ब्राजिलियन खेलाडी एलेक्स सान्ड्रोले मैदानको तल्लो भागबाट लामो दूरीको बल बक्समा दिएका थिए, जहाँ रोनाल्डो दौडिएर बेल हेडिङ गोल पुगे ।
साम्पाडोरियाका २ जना डिफेन्डरका बीचबाट उफ्रिएका रोनाल्डो यति माथि उफ्रिए कि, त्यो अहिले धेरैका लागि पत्याउनै नसकिने बनको छ । उनीसँगै उफ्रिएका विपक्षी खेलाडीलाई निकै तल छाडेर हावामा उड्दै टाउकोले बललाई भुइँतिर जोतेर उनले हानेको बलले पोस्टको दिशा लिएयो थियो । रोनाल्डोको बुलेट हेडिङ प्रहारले विपक्षी गोलकिपरको हात पन्छाउँदै छिरेको थियो ।
खेल विशेषज्ञहरू आश्चार्यमा, दुनियाँ चकित !
उमेर ३४ वर्ष पुगेका रोनाल्डोको आफ्नो उचाइ १.८७ मिटर छ । तर, उनले गत राति हेडिङ गोल गर्दा २.५६ मिटर उफ्रिए । रोनाल्डो आफ्नो उचाइभन्दा निकै माथि माथि हावामा उडेका थिए ।
स्वास्थ्य विज्ञानका अनुसार सामान्य मानिस बढीमा १ मिटर उचाइसम्म उफ्रिन सक्छन् । खेलाडी वा सम्बन्धित विधागत खेलाडीहरू बढीमा १.५० मिटरसम्म उफ्रिन सक्छन् । हाजसम्म खेलकुदमा कुनै पनि खेलाडीले १.५० मिटरभन्दा माथि उफ्रिएको रेकर्ड छैन । तर, रोनाल्डोले गत राति गोल गर्नेक्रममा २.५६ मिटर उफ्रिए । र, स्वास्थ्य विज्ञानलाई पनि चकित पारिदिए । सो गोलमा रोनाल्डोको ‘एयरिङ जम्प’ले विश्वभरका खेलाडीलाई जिब्रो टोक्न बाध्य बनाएको छ ।
रोनाल्डो हावामा कतिबेर ?
३४ वर्षका रोनाल्डोले हावामा २.५६ मिटर उडेर गोल गर्दा कति समय हावामा रहे होलान् ? यो पनि कम्ता रोचक छैन । खेलाडीको भीडबाट हेडिङ गोल गर्न हावामा उडेका उनी १.५ सेकेन्डसम्म हावामै थिए ।
प्रकाशित मिति ३ पुष २०७६, बिहीबार १९:५१